एएफसी यू-२३ छनोटको समूह चरण ड्र सार्वजनिक, नेपाल कठिन समूहमा
काठमाडौं – एसियन फुटबल महासंघ (एएफसी) को आयोजनामा सन् २०२० मा थाइल्याण्डमा हुने एएफसी यू-२३ च्याम्पियनसिपको छनोट चरणको समूह चरणको ड्र सार्वजनिक भएको छ ।
छनोट प्रतियोगिता कुल ४४ टोलीले सहभागिता जनाएका छन् । सहभागी टोलीलाई ११ समूहमा विभाजन गरिएको छ । यस प्रतियोगिताबाट अन्तिम चरणको आयोजक थाइल्याण्डसहित १६ टोली अन्तिम चरणका लागि छनोट हुनेछन् । ११ समूहका शीर्ष टोली स्वत: छनोट हुनेछन् भने तेस्रो स्थान हासिल गर्ने ४ टोली पनि अर्को चरणमा पुग्नेछन् । यदि थाईल्यान्ड आफ्नो समूहमा शीर्षस्थान हासिल गरे अथवा उत्कृष्ट ४ दोस्रो स्थानमा पारेको खण्डमा पाँचौ टोली पनि छनोट हुनेछ ।
नेपाल रहेको समूह ‘ए’ मा कतार, ओमान र अफगानिस्तान रहेका छन् । कतारमा हुने प्रतियोगिता मार्च २२ देखि २६ तारिखसम्म चल्नेछ । नेपालले पछिल्लो पटक भएको यू-२३ छनोटमा छनोट चरणबाट नै घर फर्किएको थियो । यू-२३ उमेर समूहमा नेपालको नतिजा राम्रो रहन सकेको छैन । यता कतार भने पछिल्लो संस्करणमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको टोली हो । कतारले दक्षिण कोरियालाई तेस्रो स्थानको खेलमा हराएको थियो । सेमिफाइनलमा टोली भिएतनामसँग टाइब्रेकरमा पराजित भएको थियो ।
प्रतियोगिताका अन्य समूह :
समूह ए : कतार, ओमान, नेपाल, अफगानिस्तान
समूह बी : प्यालेस्टाइन, बहराइन, बंगलादेश, श्रीलंका
समूह सी : इराक, इरान, तुर्कमेनिस्तान, यमन
समूह डी :साउदी अरेबिया,संयुक्त अरब इमिरेट्स, लेबनान, माल्दिभ्स
समुह ई : जोर्डन, सिरिया, किर्गिजस्तान, कुवेत
समूह एफ : उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान
समूह जी : उत्तर कोरिया, हङकङम, सिंगापुर, मंगोलिया
समूह एच : दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, क्याम्बोडिया, चाइनिज ताइपेई
समूह आइ : जापान, म्यानमार, टिमोर लेस्ते, मकाउ
समूह जे :मलेसिया, चीन, लाओस, फिलिपिन्स
समूह के :भिएतनाम, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, ब्रुनाई
प्रतियोगिताको अन्तिम चरण जनवरी ८-२६ सम्म थाइल्याण्डमा हुनेछ ।
प्रकाशित : बुधबार, कार्तिक २१, २०७५१५:१३
टी-१० को डेब्युमै चम्किए सन्दीप ! ‘म्यान अफ द म्याच’ हुँदै हात परे २०० डलर !
नेपाल VS जिम्बाबे- हेर्नुहोस बल वाई बल अपडेट
दिपेन्द्र र आरिफले उत्कृष्ठ पारी खेलेपछि नेपालले मलेसियालाई दियो सम्मानजनक टार्गेट !
स्कटल्यान्डमाथि पोर्चुगलको सहज जित
इब्राहिमोभिचलाई बेकह्यामले भने– ‘साच्चै बुढो भयौं’
पूर्व फरवार्ड मारियानो रियल फर्किए
१० घण्टा अगाडि बिगुल